စိတ်ကူးပုံရိပ်: September 2007
ပုထုဇဉ် ဘလောက်မှ ကူးယူဖော်ပြချက်
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 22:43 No comments: Links to this post
မဇ္ဈိမ breaking news
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:49 No comments: Links to this post
မလေးမက tag လုပ်လာတဲ့ မွေးရပ်မြေ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်ပါ။ အမေကတော့ အခုရေးထားခဲ့တဲ့ နေရာမှန်သမျှမှာ မွေးတယ်ဆိုရင် ရဟတ်ယာဉ်စီးပြီး မွေးတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပုံရိပ်ရဲ့ မွေးရပ်မြေက မြန်မာပြည်။ အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အရိပ်တွေကို ဖမ်းပြီး ရေးလိုက်ပါတယ်။
“ပန်းဆိုးတန်း၊ လမ်းသုံးဆယ် … ၊လေးဆယ့်ခြောက်… လမ်းငါးဆယ်… ပုဇွန်တောင်… သာကေတ …..”
“အကိုကြီးတို့ အစ်မကြီးတို့ရယ်… သနားကြပါ ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်မှာ စားစရာ မရှိလို့ပါ။”
“ရေခဲရေ…. ရေခဲရေ… တောက်…. တောက်…. တောက် (ခွက်ခေါက်သံ)”
အိုဟောင်း၍ ခပ်လှုပ်လှုပ်သာ ကျန်တော့သော၊ မိုးရေစိုနေသော လူတို့၏ ကိုယ်နံ့ဖြင့် စိုထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေသော ကားကြီးပေါ်မှ ခုန်ဆင်းလိုက်တော့ ခြေသလုံးလယ် အထိ ရေတွေ နစ်၍သွားသည်။ မိုးကသည်းကြီး မည်းကြီး ရွာနေသည်ကို ဂရုမစိုက်အားသေးဘဲ လုံချည်ကို ဆွဲ၍ မမိသည်။ ခေါင်းပေါ်မှ မိုးစိုသည်ကို အရေးမစိုက်တတ်ဘဲ အောက်ပိုင်းမှ အ၀တ်အစားနှင့် ဖိနပ်စိုမည်ကို ရွံ့မုန်းတတ်သူမို့ စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်မိ၏။ ရေတွေက နောက်ကျိ၍ နေသည်။ ကိုယ့်ဖိနပ်ကို မမြင်ရ။ အမှိုက်သရိုက်များ မျောပါလာသည် ကိုတွေ့နေရသည်။ မျောပါသွားမည် စိုး၍ ဖိနပ်ကို ခြေထောက်နှင့် ကုပ်ထားမိသည်။
ကိုယ့်နည်းတူ မြို့လည်ခေါင်မှာ လူအများ ရေကူးနေကြသည်။ ပလက်ဖောင်းပေါ် ရောက်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း ရောက်ခဲလှသည်။
မှန်အလုံပိတ်ထားသော ကားများလည်း ရေကူးနေကြသည်။ သူတို့ဖြတ်သွားလျှင် လှိုင်းတံပိုးများ ထ၍ ကျန်ရစ်သည်။ ကုပ်၍စီးထားသည့် ကြားမှ အဲဒီနေ့က ကိုယ့်ဖိနပ်လေး တစ်ဖက် ရေထဲ မျောပါသွားခဲ့သည်။
မိုးရေတို့ရွှဲ နေသော လွယ်အိတ်ကို တင်းတင်းပိုက်၍ ကိုယ်ကော်ဖီဆိုင် ထဲသို့ လှမ်းလိုက်သည်။ တိုက်မြင့်များ မြို့လယ်မှာ ပြိုင်ဖက်မရှိ မင်းမူနေ၏။ မှန်တံခါး အဖွင့်မှာ ထပ်၍ ချမ်းလာသည်။ ကော်ဖီပူပူ တစ်ခွက် တောင့်တမိသည်။ မိုးရေတို့ဖြင့် ရွှဲနေသောထီးကို အ၀မှာ ထောင်ထားခဲ့သည်။ ထောင့်ကျကျ ခုံတစ်ခုံမှာ ၀င်ထိုင်ပြီး ၀န်ထမ်းက ကမ်းပေးလာသော စားစရာစာရင်းကို ကြည့်သည်။ သုံးထောင်တန် ကော်ဖီတစ်ခွက် ကိုယ့်ရှေ့မှာ မကြာမီ အငွေ့တထောင်းထောင်းနှင့် ရောက်လာသည်။ ခုံအောက်မှာ ဖိနပ်တစ်ဖက်သာ ရှိ၏။
အညာနေသည် ပြင်းလှချေ၏။ အုတ်နီနီတို့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ။ အိပ်မက် တစ်ခုထဲ ရောက်နေသလို မြင်နေရသော အုတ်များကို လက်ဖြင့် အသာအယာ သပ်ကြည့်သည်။ ဘုရားများကြားမှာ ကိုယ်ရောက်နေသည်။ ပုထိုးတော်များကို မော့ကြည့်ရင်းကိုယ် ကြက်သီးထလာသည်။ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ အမည်မသိသော လွမ်းဆွတ်ခြင်း တစ်မျိုး ပြင်းပြလာသည်။ ငိုချင်လာသော မျက်တောင်များကို တဖျတ်ဖျတ်ခတ်သည်။ ကြည်နူးစိတ်နှင့် လွမ်းဆွတ်စိတ်တို့ နှစ်မျိုးလုံး အားပြိုင်နေကြသည်။
“အန်တီ… သမီးဆီက ပန်းဝယ်ပါနော်…။ တစ်စည်းလောက် ၀ယ်သွားပါ အန်တီရယ်။”
“သားဆီကလည်း ၀ယ်ပါ။ ၀ယ်ပါနော်… အန်တီရေ။”
“အန်တီရေ သမီး အနော်ရထာမင်းကြီး အကြောင်းရှင်းပြ ပါ့မယ်။ ပိုက်ဆံပေး စရာမလိုပါဘူး။”
အိပ်မက်က လန့်နိုးလာပြီ။ နောက်က လိုက်လာသော ကလေးတွေကြားမှာ ခေါင်းမူးလာသည်။ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲ နေလိုစိတ် ပြင်းထန်နေသည်။ အပြင်မှာတော့ နေပူကျဲကျဲတွင် နို့စို့အရွယ်ကလေးငယ် တစ်ယောက် သဲပေါ်မှာ ကစားနေသည်။ ကိုယ့်အိတ်ထဲသို့ လက်လှမ်းမည်ပြုသည်။ သို့သော်ရှေ့ ဆက်မတိုးမိ။
ရေလှိုင်းတို့ သာသာတိုးတိုးခတ် နေသော တောင်သမန်အင်းသည် တိုင်လုံးကြီးများအောက်မှာ ၀ပ်ဆင်း၍ သွားကုန်၏။ ရေစပ်တွင် အပေါ်ပိုင်း အ၀တ်ဗလာနှင့် ကလေးတချို့ ဆော့ကစား နေကြသည်။ တံတားပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်လာရင်း ကိုယ်ခုံတန်းတစ်ခုမှာ ထိုင်၍ငေးနေမိသည်။ စက်ဘီးလေးများ တံတားပေါ်မှ ဖြတ်သွားကြသည်။ တုန်ရင်သွားသော သစ်သားချောင်းလေးများကို ကိုယ်လိုက်ကြည့် မိသည်။ ထိုသစ်သားချောင်းတို့ပေါ်တွင် တုန်ရင်နေသောလက်ဖြင့် ကိုင်ထားသော ခွက်တစ်လုံး ရှိနေသည်။ ကြမ်းကြားထဲမှ လှေတစ်စင်းကို လှမ်းမြင်နေရသည်။ တံတားအောက်ဖက် ကုန်းပေါ်မှ အကြော်ဆိုင်တွင် မီးခိုးအူနေသည်။ အင်းထဲမှ ငါးတချို့ ဆီအိုးထဲမှာ ရောက်နေသည်။
နိုင်ငံခြားမှ ရောက်နေသူ အချို့ ဗမာအ၀တ်အစား ၀တ်ထားသည်။ မြန်မာပြည်တွင် နေသူအချို့ ဘောင်းဘီကို ကျကျနန ၀တ်ထားသည်။ မြန်မာပြည်သား အချို့ အရောင်မဖမ်းနိုင်တော့သော အ၀တ်အစားကို ၀တ်ထားသည်။
လေသည် ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်လျက်။ လူတစ်ကိုယ်လုံး ယိမ်းယိုင်ချင်လာ သော်လည်း လတ်ဆတ်သောလေကို အဆုတ်ထဲအထိ အားပါးတရ ရှူသွင်းလိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် လေရှူခွင့် မရတော့မှာလို၊ လေအားလုံး ကုန်ဆုံးသွားမှာလို အငမ်းမရ ရှူရှိုက်မိ၏။ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်မှာ တင်ထားသော ပ၀ါလေး လေအဝေ့မှာ လွင့်ပါသွားခဲ့ပြီ။ ကိုယ်လိုက်မဖမ်းမိ။ အင်းထဲ တစ်နေရာမှာ မျောပါသွားပါလိမ့်မည်။ အင်းထဲ တစ်နေရာမှာ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ ဒီနေရာက ကိုယ်ထွက်သွား ရတော့မည်။ ဘာကြောင့်ထွက်သွား ခဲ့သလဲကွယ်။ မွေးရပ်မြေကို ထားခဲ့မှတော့ ပ၀ါလေး တစ်ထည်ကို မနှမြောမိတော့ပါ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:144comments: Links to this post
၀န်ခံချက်။ ။ဒီစိတ်ကူးနဲ့ ရေးတဲ့စာကို ဆရာမဂျူးရဲ့ ပင်လယ်နှင့်တူသော မိန်းမများ စာအုပ်မှ ဒေါ်ငွေအိမ် နေရာမှ ခံစားပြီး ရေးပါတယ်။ နှစ်တွေကြာလို့ အသေးစိတ်ကို မမှတ်မိတော့ပါ။ အကြောင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ ခွင့်လည်း မတောင်းနိုင် ခဲ့ပါ။ ဆရာမ ခွင့်လွှတ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ သတ္တိအပြည့် ရှိတဲ့ အမေတွေ၊ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို စွန့်ရဲပြီး ပါရမီဖြည့်နိုင်သူတွေကို ရည်စူးပြီး ရေးပါတယ်။
အပြင်မှာ မိုးတွေရွာနေပြီ သမီး။ အိမ်ကလေးဟာ မိုးဒဏ်ကြောင့် သိမ့်သိမ့်တုန်နေပြီ။ သမီးငယ်ငယ်က ဒီအချိန်ဆို မိုးရေထဲမှာ ခုန်ပေါက်ပြီး ဆော့နေကျပေါ့။ သမီးက မိုးစက်လေးတွေကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ အမေအော်တာကို မမှုဘဲ မိုးရွာရင် အိမ်ရှေ့ ကပြင်လေးကနေ ငေးကြည့်နေရာက ဆင်းသွားပြီး မိုးရေချိုးတော့တာပဲ။ အမေလည်း နောက်ဆုံးပြောမရတော့ သမီးကို လိုက်လျောရတာပဲ။ ငယ်ငယ်ထဲက သမီးဟာ အဲဒီလို ဇွတ်တရွတ် ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို လုပ်တတ်တယ်။ ခေါင်းလည်းမာတယ်။ တခါတုန်းကများ သမီးသွားကြည့်ချင်တဲ့ ဟောပြောပွဲကို လိုက်မပို့လို့ အိမ်ထဲကို မ၀င်ဘူး။ တညလုံး အပြင်မှာ ထိုင်နေတာလေ။ အမေကတော့ ငါ့သမီးလေးကို စိုးရိမ်လို့ပါ သမီးရယ်…။
အင်း….ဒီစိတ်တွေကိုဟာ သမီးကြီးလာတဲ့ အထိပါလာတာပဲ။ သမီးဟာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို သဲကြီးမဲကြီး ဖတ်တယ်မှတ်တယ်။ ခေတ်ကြီးကြောင့် သမီးကို ကျောင်းကောင်းကောင်း မထားနိုင်ပေမယ့် သမီးတကုပ်ကုပ်နဲ့ စာတွေဖတ်နေတာ အမေအမြဲ တွေ့နေရတယ်လေ။ သမီးယုံကြည်တဲ့ ၀ါဒအကြောင်းကို အမေမသိပေမယ့် ငါ့သမီးကို အမေယုံခဲ့တယ်။ ဟိုး အစကတည်းက ယုံခဲ့တာပါ။ သမီးဟာ အားနည်းတဲ့လူတွေဖက်က ရပ်တည်မယ်၊ လိုအပ်သူတွေကို ဦးဆောင်ကူညီမယ် ဆိုတာတွေကိုလေ…အမေသိတာပေါ့။ သမီးရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သမီးရဲ့ စာအုပ်တွေထဲက ဖတ်လို့ရသလို အမေက သမီးမျက်နှာကို အမြဲတမ်း ဖတ်ခဲ့တယ် သမီး။ အမေကတော့ တောသူမ၊ လယ်သူမကြီးပဲ။ လယ်တွေ ယာတွေ အကြောင်းကလွဲလို့ တခြားဘာမှ မသိခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို မသိခဲ့လို့လဲ သမီးဟာတစ်နေ့မှာ အမေ့ကို ခွဲသွားလိမ့်မယ် ဆိုတာ ကြိုတင် မရိပ်မိခဲ့ဘူး။
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ မိုးတွေရွာနေပြန်တယ် သမီး။ မနက်အစောကြီး အမေဆွမ်းချက်ဖို့ ထလာခဲ့တော့ အိမ်ရှေ့တံခါး ပွင့်နေတယ်လေ။ အမေရင်ထဲမှာ ထိတ်ကနဲဖြစ်သွားတယ်။ သမီးထွက်သွားမယ် ဆိုတာကို အမေ့မသိစိတ်ထဲက သိနေတယ် ထင်ပါရဲ့။ ဒါနဲ့ အမေသမီး အခန်းထဲကို ၀င်ကြည့်တော့ အိပ်ယာကနွေးနေဆဲ။ သမီးထသွားတာ မကြာသေးဘူး ထင်တယ်။ အိပ်ယာကို သမီးလုပ်နေကျ အတိုင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ် ပြန်ခေါက်သွားသေးတယ်။ သမီးခေါင်းအုံးပေါ်မှာ စာခေါက်ကလေး တစ်ခု။
“အမေ…သမီးယုံကြည်ရာကို လုပ်ဖို့ အိမ်ကထွက်သွားပါတယ်။ အမေနဲ့အားလုံး အတွက်ပါ။ သမီး ပြန်လာပါ့မယ်။ ကန်တော့ခဲ့ ပါတယ် အမေ…” တဲ့။
သမီးပြန်လာ ပါ့မယ် ဆိုတဲ့ ကတိ တစ်ခုထဲနဲ့တင် အမေကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ သမီးရဲ့ ယုံကြည်မှု အတွက်ဆို အမေဘယ်လိုမှ တားမရဘူး ဆိုတာသိနေသားပဲ။
ဒီနောက်မှာတော့ အမေဟာ သမီးသတင်းကိုပဲ အဝေးက နားစွင့်နေခဲ့တယ်။ လူတွေက သမီးအကြောင်းကို ချီးကျူးကြရင် အမေဟာ သမီးမရှိတဲ့ ဘ၀မှာလည်း နေပျော်နိုင်ခဲ့တယ်။ သမီးကို လိုက်ရှာနေကြတယ်လို့ ကြားရင်တော့ အမေကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင် မဆုံးဘူး။ ဘာကြောင့် သမီးကို အမေနိုင်အောင် အုပ်မထိန်းနိုင်ခဲ့သလဲ၊ ဘာကြောင့်များ ဒီလိုလွှတ်ထားမိသလဲ၊ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ သမီးပြန်လာမယ် ဆိုတဲ့ကတိကြောင့်ပဲ အမေအရုဏ်ကို မျှော်မိတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ အမေမျှော်တဲ့ အတိုင်းပဲ အမေရဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးလေး ပွင့်လာတယ်။ အမေ၀မ်းသာလွန်းလို့ အသံတွေတောင်တုန် နေပါတယ်။ သမီးကရောက်ရောက်ချင်းပဲ အမေသမီး ထမင်းမစားရတာ နှစ်ရက်ရှိပြီလို့ ပြောရှာတယ်။ အမေလည်း ရှိတဲ့ကန်စွန်းရွက် ချဉ်ရည်နဲ့ ငပိထောင်းကို ချကျွေးတာ။ ထမင်းကုန်သွားတော့မှ သမီးခေါင်းမော့လာပြီး “အမေ…ထမင်းရှိသေးလား” တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ အမေသမီးကို တခါတည်း အမေ့ဆီမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ချင်တော့တယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးရယ်…သမီးပြောဖူးသလိုပေါ့။ သမီးကို ဘာမှလုပ်ခွင့် မပေးဘဲ အမေ့အတွက်ချည်း သိမ်းထားတာက ချစ်ရာမရောက် ပါဘူး။ သမီးရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ခွင့်ပေး ထားတာအမေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ သမီး။ ဒီလိုနဲ့ ထမင်းစားအပြီး၊ မောမောနဲ့ အမေခင်းပေးတဲ့ ဖျာကြမ်းပေါ်မှေးလို့ အပြီးမှာ သမီးဟာ ထွက်သွားရပြန်တယ်။
“အမေ….သမီးထပ်သွား ရဦးမယ်။ အမေ့ဆီ သမီးဆက်ဆက် ပြန်လာခဲ့ ပါ့မယ်။”
ဒီလိုနဲ့ အမေဟာ သမီးမရှိတဲ့ နေ့တွေမှာ နေသားကျလာ ပါတယ်။ သမီးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို အမေပိုပြီး တန်ဖိုးထားတတ် လာတယ်။ သမီးရဲ့ ခင်ပွန်း အမေ့သမက်ဟာလည်း ကံမကောင်းရှာ ပါဘူး။ သမီးကို သူသိပ်ချစ်လွန်းပေမယ့် သမီးကိုလည်း သူမတားနိုင်ခဲ့ဘူး။ သမီးကို ဘယ်အရာကမှ မတားနိုင်ဘူးလားကွယ်။ သမီးရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ် လာမယ့်နေ့ကို အမေလည်း စောင့်နေခဲ့တယ် သမီး။ အဲဒီနေ့ဟာ အမေတို့ ပြန်ဆုံရမယ့်နေ့ ရယ်လို့ အမေစိတ်ထဲမှာ စွဲထားလိုက်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အမေနည်းနည်း နေပျော်တတ် လာတယ်။
အဲဒီနေ့…..။ အဲဒီနေ့ကို အမေ မမေ့ဘူး။ အဲဒီနေ့ဆိုတာ သမီးရယ်….အမေတို့ နှစ်ယောက်လုံး မျှော်လင့်တဲ့နေ့ မဟုတ်ဘူး သမီး။ သမီးရဲ့ သတင်းကို ကြားရတဲ့နေ့။ ဒီလိုသတင်းမျိုးကို အမေကြားရနိုင်တယ် ဆိုတာ သိနေလျက်နဲ့ တကယ်တမ်းမှာတော့ အမေ ခံနိုင်ရည် မရှိဘူး။ သမီးကို နောက်ဆုံး အနေနဲ့တောင် အမေကြည့်ခွင့် မရှိခဲ့ဘူး။ သမီးကျသွားတဲ့ နေရာမှာပဲ သမီးကို မြှုပ်ခဲ့ပြီ တဲ့။ အမေဟာ ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ နေသားကျနေတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီဆုံးရှုံးမှုကိုတော့ အမေမခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ သမီးနှစ်သိမ့်ခဲ့တဲ့ စကားတွေကိုတော့ အမေမှတ်မိနေသားပဲ။ ဒီလို အခြေအနေမှာတောင် အမေ သတိရနေနိုင် သေးတယ်။
“အမေ… သမီးအမေ့နားမှာ ရှိမနေပေမယ့် သမီးရဲ့ ယုံကြည်ချက် အမေ့ဆီမှာ ရှိတယ်။ သမီးစိတ်ဟာ အမေ့ဆီမှာ ရှိတယ်။ ဟိုး…အပြင်ကို ကြည့်စမ်းပါ အမေရယ်။ လယ်ကွင်းထဲမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်နေလည်း ဆင်းရဲမြဲ ဆင်းရဲနေကြတဲ့ လယ်သမားတွေ။ သမီးတို့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ဒီလို မဖြစ်အောင် သမီးကြိုးစားဖို့ အများကြီး လိုသေးတယ်။ ဒီလူတွေကို တွေ့ရင် အမေသမီးကို သတိရပါနော်။ အဲဒီအချိန်မှာ သမီးဟာ အမေနဲ့ အမြဲရှိနေပါတယ်။”
သမီးဘာ လုပ်လုပ် အမေဟာ အမြဲတမ်း သမီးနောက်မှာ ရှိနေတယ်။ ငါ့သမီး အမှန်တရား အတွက် လုပ်နေတယ် ဆိုတာ အမေယုံတယ်။
ဘ၀ဆိုတာ ခင်တွယ်စရာ အလွန်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ လူတွေဟာ သေခြင်းတရားကိုလည်း ကြောက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးရယ်….တခါတလေမှာ ဒီဘ၀ကို နေရဲဖို့ သတ္တိတွေလိုတယ်။ အမေ့အတွက် သတ္တိတွေဟာ သမီးရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ ယုံကြည်ချက်တွေ ဆက်လက် တည်ရှိနေသရွေ့ ရှိနေမှာပါ။ ပြီးတော့ သမီး လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ ဘ၀တွေ အတွက်……. အမေ အသက်ရှင် ရဲပြီ သမီး။
အမေ့ရဲ့ မျက်ရည်တွေ ခမ်းနေတဲ့ မျက်နှာကို မော့ကြည့်မယ့် သမီးရဲ့ သမီးလေးနဲ့ သားလေး အတွက် အမေ နေရဲပြီ သမီး။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 19:51 8 comments: Links to this post
ရေးနေတဲ့ ၀တ္ထုလေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပြီ ဆိုတော့ ဘာရေးရမလဲလို့ ပုံရိပ်စဉ်းစား နေတုန်း ကိုနတ်ဆိုးက tag ထားပါလားလို့ သတိရသွားတော့ တင်စရာလေးတော့ ရပြီဟ ဆိုပြီး ၀မ်းသာသွားတယ်။ မလေးကလည်း ရေးချင်ရေးပါလားလို့ ပြောဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကြိုက်ဆုံး ငါးခုအကြောင်း ရေးပြီနော်….။
၁) သားကြီးလာရင် (ရေးရင်းကနေ မမျှော်လင့်တဲ့ ပုံစံတစ်ခုနဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သဘောကျသွားတဲ့စာတစ်ပုဒ်)
၂) အခြေခံလို အပ်ချက်(စိတ်ထဲမှာ ရှိတာလေးတွေကို စီကာစဉ်ကာ ရေးဖြစ်သွားတဲ့ စာ)
၃) ဖြတ်ချင်ဖြတ် မဖြတ်ချင်နေ (အရင်က ရေးခဲ့ဖူးတဲ့၊ အခု မရေးတတ်တော့တဲ့ ဟန်နဲ့ စာ)
၄) ပတ်ချာလည် (ကဗျာ ပါရမီမရှိတဲ့ ပုံရိပ်ရဲ့ ကဗျာထဲမှ အကြိုက်ဆုံး ကဗျာတစ်ပုဒ်)
၅) ညတမ်းချင်း (သရုပ်ဖော် ပုံလေးကို တင်ချင်လို့ ရေးလိုက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်)
PS: အပန်းမကြီးဘူး ဆိုရင် လာဖတ်တဲ့ ရောင်းရင်းတွေလည်း ရွေးပေးသွားပါဦး။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:08 No comments: Links to this post
“ရှင်….ပြန်မလာသေးဘူးလား။ ဟုတ်တယ်။ ဒီနေ့ အချိန်စေ့မယ်။ ဟုတ်ပြီ။ ပြန်လာရင် ကျွန်မကို ဖုန်းခေါ်လိုက်။”
ပုံရိပ်၏ စာရေးဆရာမ ဘ၀ကို ခဏယူသွားသူ ကအချိန်မီ ပြန်မရောက်လာ။ သူရောက် မလာမချင်း ယခုကလေး ဘ၀မှာပင် ဆက်၍ နေရဦးမည်။ ဆက်နေနေစဉ် ကာလအတွင်းမှာ ကောင်လေး၏ မွေးနေ့ပွဲ လုပ်လိုက်သေးသည်။ ကောင်လေး အလွန်ကြိုက်သော game ထဲမှ အရုပ်များကို လက်ဆောင်ပေးကြသည်။ (ဘာမှန်းလဲ မသိဘူး။)
“Happy Birthday to you…” ဟူသော သီချင်းကို အာဘောင်အာရင်း သန်သန်ဆိုကြသည်။ မွေးနေ့ကိတ်လှီး ကြသည်။ မွေးနေ့ပွဲ တက်ရောက်လာသော ကလေးတွေ ကိုကြည့်ရင်း ခေါင်းနောက်လာသည်။
မွေးနေ့ပြီး နောက်နှစ်ရက် အကြာမှာ အကျိုးဆောင်ဆီမှ ဖုန်းရသည်။ စာရေးဆရာမ ဘ၀ကို ခေတ္တယူထားသူ ပြန်ရောက်လာပြီ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟု မေးတော့ ယူသွားစဉ် အချိန်အတွင်း လမ်းအလျှောက်လွန် သွား၍ ဆရာမက ဖျားသည် ဆိုလား ဘာဆိုလား။ (ဆရာမမှာ ကားမှ မရှိဘဲကိုး။) ဘ၀ကို ယူသွားသည့် အတိုင်း ပြန်ပေးရမည် ဆိုတော့ ယူသွားသူက နေကောင်းသည် အထိ စောင့်နေသည်တဲ့။ ပြီးတော့ စာရေးဆရာ ဘ၀ကို မကြိုက်ပါတဲ့။ စာမူခလည်း ကောင်းကောင်း မရဘူးတဲ့။ ကဲ…ရှိစေတော့။ ခုတော့ ယမမင်းထံမှ မန်နေဂျာနှင့် ချိန်းထားသော ရက်ချိန်းလည်း လွတ်ခဲ့ပြီ။ ရက်ချိန်းအသစ် ပြန်ယူ ရပေတော့မည်။
“မန်နေဂျာနဲ့ တွေ့ချင်လို့ ရက်ချိန်းယူ ပါရစေ။ ရှင်…… နောက်တစ်ပတ်မှ။ ဟို……မရဘူးလေ။ ကျွန်မရက်က ဒီစနေပြည့်မှာ။ လုပ်ပါ။ တောင်းပန် ပါတယ်။”
နောက်ဆုံးတော့ အခြေအတင်ပြောပြီး မန်နေဂျာနှင့် တနင်္လာနေ့မှာ တွေ့ခွင့်ရသည်။ ရင်တော့ နည်းနည်းပူလာသည်။ ပြန်လဲလို့ မရရင်တော့….အင်း… ဟုသက်ပြင်းချသည်။
ချိန်းသည့်နေ့မှာ ပုံရိပ်စောစော ရောက်နှင့်နေသည်။ ကိုယ့်ကိုယ် အမြင်ကြည်လျှင် သက်သက်ညှာညှာ ပြောလေမလား ပေါ့။
“ကျွန်မ ဒီဘ၀ကို အစမ်းသပ်ခံကာလနဲ့ နေတဲ့ အချိန်လွန်သွားပြီ ဆိုတာနားလည် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုဟာက ရှင်တို့ဘက်ကလည်း ရောင်းဖို့ ပြတ်နေတာကိုး။ အဲဒါကြောင့် ခြွင်းချက် အနေနဲ့ ပြန်စဉ်းစား ပေးသင့် ပါတယ်။”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစ်မဘက်က ပြန်ပေးတဲ့ အချိန်ကိုက လွန်နေတာကိုး။ ပြန်ပေးလို့ မရပါဘူး ခင်ဗျာ။ ဒီမှာ ကြည့်ပါ။ ဒီစာချုပ်က အစ်မကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ထိုးပေး ခဲ့တာ။ ဒီထဲမှာ ရေးထားတာကို အစ်မဖတ်ကြည့် ပါဦး။”
သူပြသော နေရာကို ကြည့်တော့ fine print စာလုံးများ။ ဟိုက် သေဟ…။ fine print ကိုမဖတ်ဘဲ ထိုးပေးခဲ့သော ကိုယ့်လက်မှတ်။ ရေးထားသည်မှာ ဘာအကြောင်းကြောင့် ဖြစ်စေ အချိန်မီ မလဲနိုင်ပါက ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်မလဲပေးပါ တဲ့။
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ပဲ အရှုံးပေးလိုက် ရပါ၏။ သို့နှင့် ပုံရိပ်သည် စာရေးဆရာမ ဘ၀ကိုယူထား သော်လည်း ဘယ်လိုရေး ရမည်မသိ သောကြောင့် ဘလောက်ဂါ တစ်ယောက်ဖြစ် လာပါတော့သည်။ လိုချင်တာတွေ များသောကြောင့်၊ လိုချင်တာကို မသိသောကြောင့် ဒီဘ၀တွင် ပိတ်မိနေသော ပုံရိပ်ပင်တည်း။
စာရှုသူ အသင်… အသင်ကော ဘယ်ဘ၀မှ လာ၍ ဘယ်ဘ၀တွင် ပိတ်မိနေပါသနည်း……..။
(သေချာ စဉ်းစား ကြည့်ဦးနော်…။)
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 18:505comments: Links to this post
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 02:482comments: Links to this post
တီ..တီ။ ခါးကြားထဲမှ မြည်လာသောဖုန်းကို ကောက်ကြည့်လိုက်သည်။
“ဟယ်လို..။ ရှင်…ဘယ်လို။ ရောင်းမယ့်လူ မရှိလို့…။ မဖြစ်ဘူးလေ။ ကျွန်မ မန်နေဂျာနှင့် လာတွေ့ ပါရစေ။ ဟုတ်ပြီ..။ ဘယ်တော့လဲ။ နောက်လေးရက် ကြာရင်နော်။ ကောင်းပြီ။”
ယမမင်းထံတွင် ဘ၀ရောင်းချင်သူများ ပြတ်လပ်နေ၏။ လောလောဆယ်တွင် ဘ၀ရောင်းချင်မည့်သူ မရှိလျှင် ပုံရိပ်လက်ရှိ စာရေးဆရာမ ဘ၀မှ ခွာ၍မရ။ မန်နေဂျာနှင့်တွေ့ပြီး စကားပြောဖို့ရန်မှာ ရက်ချိန်းချက်ချင်း မရနိုင်၍ နောက်ထပ်လေ်းရက် ထပ်စောင့်ရဦးမည်။ အခုတော့ ယခုဘ၀မှာပင် ဆက်၍ နေရဦးမည်။ အခြေအနေကတော့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး မဟုတ်ပါ။
ထိုအချိန်မှာ နောက်ဖုန်းတစ်ခု ၀င်လာသည်။ Caller ID မှာ ယမမင်းထံမှ မဟုတ်။
“ကျွန်မတို့ အစ်မအကြောင်းကို ကြားလို့ ကူညီပါရစေ။ ဒီလိုပါ။ ကျွန်မတို့က ဘ၀၀ယ်ရောင်း အကျိုးဆောင်ပါ။ အစ်မလို ဘ၀လဲချင်သူများကို ကျွန်မတို့က ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ xxxx ကိုလာခဲ့ ပါလား။”
အကျိုးဆောင်၏ ကောင်းမှုကြောင့် ပုံရိပ်ထွက်ပေါက် တစ်ခုတော့ ရခဲ့ပြီ။ ယာယီစာရေးဆရာမ ဘ၀ကို မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ရောင်းနိုင်သည်။ ဒီအကျိုးဆောင်များက ဈေးကွက်ကို ရှာပေးမည်။ မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် တရားဝင်ရောင်းဝယ်ခွင့် မရှိသော ဘ၀အချို့ကို ၀ယ်ယူနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ပုံရိပ်၏ လက်ရှိဘ၀ကို ၀ယ်မည့်သူရှိမှ သာလျှင် အကျိုးဆောင်တို့ ၀ယ်ယူထားသော ဘ၀များထဲမှ တစ်ခုကို လဲလှယ်ခွင့် ရမည်။ (ဟူး…ရှုပ်နေတာပဲ။)
ဒီလိုနှင့် ပုံရိပ်၏ လက်ရှိ စာရေးဆရာမ ဘ၀ကို လူတစ်ယောက်အတွက် အစမ်း အမြည်းပေးလိုက်သည်။ သုံးရက်ကြာလျှင် ပြန်ရမည်။ ထိုအတောအတွင်း ဘ၀အသစ် တစ်ခုကို ပုံရိပ် မြည်းစမ်းခွင့် ရသည်။
ထိုဘ၀ မှာပုံရိပ်က ၁၁နှစ် အရွယ်ကောင်လေး တစ်ယောက်။ ကောင်လေး၏ မိဘများမှာ အလွန်ချမ်းသာသည်။ ရွှေတောင်ကြားတွင် နေသည်။ ကောင်လေးကို အင်္ဂလိပ်လို သင်သော ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် ထားသည်။ သားတစ်ယောက် ထဲဖြစ်၍ လိုချင်တာ အကုန်ရသည်။ အလွန် အလိုလိုက် ခံရသည်။ (ငှဲ..ငှဲ…ငှဲ)
ကျောင်းက ပြန်လာတော့ အလွန်ခမ်းနားသော အိမ်တစ်အိမ်ရှေ့မှာ ကားဆိုက်သည်။ ကောင်လေး တဖြစ်လဲ ပုံရိပ်ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသည်။
ဟိုက် ဘယ်လို ဖြစ်ပါလိမ့်။ minibrain ၏စေခိုင်းချက် အရ ပြောလိုက်သော်လည်း နဂိုမူလ ပုံရိပ်က ဇဝေဇ၀ါ။
“I’m hungry..I’m hungry.”
ကောင်လေးက ပြေးလွှား၍ သူ့အမေရှိရာ မီးဖိုခန်းသို့ ၀င်သွားသည်။ ပုံရိပ် စိတ်နှင့်ကိုယ်နှင့် မကပ်ဖြစ်နေသည်။ သူ့အမေပြင်ပေးသော မုန့်ကိုစားရင်း ကောင်လေး၏ ဦးနှောက်တွင်းတွင် ရှာဖွေကြည့်သည်။ ဗမာစကား ပြောလေ့ ရှိသော အလေ့အထကို မတွေ့ရ။ ဗမာစာ ဖတ်တတ်ခြင်းကိုလည်း မတွေ့ရ။ ဗမာစကားကိုတော့ နားလည်ပုံ ရသည်။
“သား ဒီနေ့ ကျောင်းမှာ ဘာတွေ လုပ်ရလဲ။”
“The teacher taught us to draw. I drewabig dinosaur.”
ဗမာလို ပြန်ပြောလိုက်ချင်သည်မှာ အလွန်ပင်။ သို့ပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း minibrain ထံမှ ညွှန်ကြားချက် ရသည်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောပါတဲ့။
“သားရေ… အ၀တ်အစား လဲနော်။”
“Yes. A lot of homework, Mommy. But tomorrow’saSaturday. Can I do it tomorrow? Please?”
“ကဲ… ဟုတ်ပြီ။ ဟုတ်ပြီ။ သား… ဟိုဘက်အိမ်မှာ သွားဆော့ မှာလား။”
“No, Mommy, I’ll play games on the computer. Daddy bought meanew game. He said that I had to wait until the weekend. Where’s Daddy?”
“သားဒက်ဒီ အလုပ်က ပြန်မလာသေးဘူးလေ။ မာမီဆီမှာ သော့ရှိတယ်။ သိမ်းထားတဲ့ နေရာ မာမီသိတယ်။ လာ..လာ..။”
ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တော့မှ တွေးချိန်ရသည်။ မြန်မာပြည်တွင် နေပြီး ဗမာစကားတစ်လုံးမှ မပြောတတ်သော၊ ဗမာစာ တစ်လုံးမှ မဖတ်တတ်သော မြန်မာပြည်သား ဘ၀တွင် ဆက်နေ၍ မဖြစ်ပါ။ (မျိုးချစ်စိတ်ရှိလွန်းလို့ တော့မဟုတ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ မှာစားလို့ မရတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ… ဟီး။) ဖုန်းကို ထုတ်လိုက်သည်။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 23:123comments: Links to this post